Corona dambudziko: Inogona kutora kusvika pamakore maviri kusvika matatu usati wabuda mukuvhara zvakare, kunze kwekunge matanho ekutanga achitsvaga uye maapps: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 7 April 2020	• 18 Comments
Nekuti iyo yekumhanya kwekusimudzira kweiyo coronavirus criris inomhanya kwazvo, zvinoita sezvingangoita kuti usasimbe. Kunyange zvakadaro, ini ndoda kupa kujekesa munhandare yehondo. Izvi zvinotanga nekupfupisa kwezvimwe zviitiko zvinoshamisa. Kunyange zvingave zvakaoma kuramba uine tariro uye kuti uone tariro panguva ino yekuchinja kukuru, ndinoda kukuudza kuti ndizvo chaizvo. Makasimba; yakasimba kwazvo!
Kuongorora kunotanga kushaya hope, nekuti ndinofanira kutaura kuti kutengeswa kunodzorwa kwechi chiratidzo kurudyi, kufanofungidzirwa mubhuku rangu, kuri pedyo. Munguva yaTrump, chinyorwa ichocho chakabatanidzwa kune 'kufunga kwakasimba' kuburikidza nevanhu vakaita saAlex Jones (infowars.com) naRobert Jensen (jensen.nl) kuburikidza naTrump mumwechete, Boris Johnson, Jair Bolsonaro (Brazil) uye vanhu vakaita saTierry Baudet uye icho chakabirirwa kune 'kufunga kwekusangana'.
Icho 'kurudyi' chiratidzo chinofanira kupepetwa kuitira kuti chigone kushanda kune hukuru-hwemapapiro kumusoro, kuburitswa kweGreen New Deal uye nyika yemakomunharaunda yoruponeso. Mukutarisa, iyi nyika yeruponeso yakanaka kune zvakatipoteredza, inopa mari yekutanga uye kugovera hupfumi, asi ichaiswa mumatanho ehutongi 'internet ye (kurarama) zvinhu' tekinoroji.
Tarisa uone mafambiro ezviitiko uye ziva iyo yakajairika tambo. Ndokumbirawo ubaye pane zvebhuruu zvinongedzo kuti uone zvichengetedzo:
Johnson & Johnson Bazi reDutch Janssen anoti anogona kunge aine mushonga wekudzivirira, asi "uchavepo" mumatsutso a2021 (saka kana uchida kubuda kunze kwekuvhara, unofanira kupinda muChina nzira, ona p. 11).
Bill Gates: anovaka 7 vaccine mafekitori zvekugadzira
Bill Gates: Hapana munhu anobvumidzwa kufamba zvakare pasina chitupa vaccinated uye / kana vakavaka kusadzivirirwa
Boris Johnson kuchipatara cheICU (meseji: kusarudzika kweiyo coronavirus nemucheka kurudyi)
VaTrump vachapomedzerwa mhosva yekusava nehanya kusadzidzisa / kusarayiridza nemazvo kubva kuna Gavhuna weGeorgia
Iyo mhando kurudyi ichapomedzerwa yekusava nehanya yengozi inobuda
Jensen anotsigira Trump uye anokwevera vateveri mumusungo (asi haatauri nezveTrump nhepfenyuro yekupedzisira, nekuti anoziva kuti Martin Vrijland anomufumura mune izvi)
Jensen anoratidza kutyisidzira kwe3-gore kukiyanhepfenyuro zuro) uye nekudaro muchivande chinangwa chekuponeswa chavanoda kutengesa: zvakapfava-kuvhurika (kuburikidza nezviridzwa uye tech) pane kuomerera pakuramba
Jensen: Thierry Baudet anoomerera funga kusvika kumagumo (iyo brand kurudyi inosangana neTrump zvakare)
Jensen haambobvunzi mubvunzo wehutachiona uye / kana iyo yakasvibiswa nyaya chaizvo chaizvoasi inongotarisa vateereri pahuwandu (chikamu cheiyo brand yenyika zano)
Kurekodha vhidhiyo kubva kuChina kunoratidza inotarisirwa ramangwana uye inounza seyakanaka mhinduro (ona p. 8), onawo ichi Trouw chinyorwa.
De Green New Deal hutopia yekugovera hupfumi - pamwe nemari yekutanga - inobata kune vanhu (ikozvino mukuvharira) muromo unodiridza sausage yenyika
iyo inodzora kuramba (nyika ruoko) yatanga antenna masts kupisa moto kuitira kuti ubatanidze vanopikiswa ne5G kune nhema dzekuti 5G inoziva hutachiona, uye ipapo njodzi chaiyoiyo 5G uye iyo internet ye (kurarama) zvinhu discrediting.
Iyo kalendari yaLuciferian inoratidzwa kwese kwese kuburikidza nechiratidzo cheraraungu (ona bhuku); futi panguva yekutaura naBritish coronagin Elizabeth.
Tinofanira kutanga kutenda musimba redu pachedu pane kuzvitarisira kubva kumusoro. Zvakakosha kuti iwe uti 'Kwete' uye nekuona kuti uri kuridzwa pachiyero chakakura. Yasvika nguva yekuti iwe uti "Hongu" kune yako pachako simba uye nesimba rakazvimirira.
Kutamba mumass Links en zvakarurama mutambo unotarisana uye wakarongeka: 'matchmaking'. Chinyorwa cheichi chiitiko chose chaive chatove pasherufu. Ini ndinorondedzera izvo mubhuku rangu. Icho chinyorwa umo iyo brand kurudyi inogona kutanga kukura mukutsigirwa uye ipapo ngarava yacho inenge yanyudzwa yakazara yakazara nevanofunga zvakaoma.
Izvi zvinoisa nzira yemisasa yekudzidzira ( Uye zvakare, zvese zvaunotenga kana kutengesa zvinorembera mu 'internet yezvinhu' uye uchaita mucherechedzo unofanirwa kunge wagamuchira ID yako yedhijitari, inosanganisira yako yekudzivirira, uye kune yako zvikwereti zvezvemagariro uye bhangi zvakabatana.
Dambudziko iri ndere chaizvo sezvandakafungidzira mubhuku rangu. Saka zvinokurudzirwa kuve neiyo zivo yekutanga (kusanganisira iya nezve NLP uye hypnotic maitiro) uye vagovane. Nekuti, sezvaunongoenda kuchipatara kunotora chiremba mapaini dambudziko risati rauya nemhinduro, zvakafanana zvinoenda kune yeLuciferian virus system iyo isu tava kuona iko chaiko kumeso. Iwe neni tine mhinduro, asi isu tinofanira kutanga tanzwisisa dambudziko. Naizvozvo, tanga kuverenga uye kuparadzira meseji.
pano Verenga chirevo yemusangano wanhasi wenhau.
Source chinyorwa listings: telegraaf.nl, time.com, facebook.com, yezve.com, trouw.nl, geenstijl.nl
2020 ichaita gore rakabudirira here? Zvido zvakanaka kubva kuna Martin Vrijland
Nei VaTrump vasiri vanopikisa globalist asi imwe aristocracy pawn
Kuparadzwa kwekutengesa kwechiratidzo 'rechts', Trump, Brexit (uye zvose zvakabatana nayo) zvakatanga
Tags: 3, App, Baudet, Bolsonaro, chinese, Chinese, corona dambudziko, coronavirus, vatatu, Featured, IC, gore, Jensen, Johnson, lockdown, brand, system point, zvakarurama, Trump, mushonga
Domi akanyora kuti:
7 April 2020 pa 10: 44
Mhoroi Martin, ndichagadzirira nguva vhiki ino kuverenga bhuku rako! Zvandiri kushingairira: une mafungiro here pamusoro paDavid Icke?
7 April 2020 pa 13: 57
Verenga maitiro aya zvakare:
7 April 2020 pa 20: 28
Kubvunzurudza kwekupedzisira naDavid Icke kuLondonreal kwakasimba. Izvo hazvirevi kuti vhidhiyo kubva kuYouTube yakakandwa kuti Brian Rose pachake anoshamiswa uye kuti pane zvakawanda zviri kuitika.
Mukupedzisira, Icke anoti kwete kuteerera uye kuti uyu mukana wekupedzisira ndewekuchengetedza sununguko.
Kugara wakanyarara uye kubvuma kuri kuzvichengetedza uri mubhokisi / bubble. Ipapo vanoshusha / vamwari vemasimba vanokamba vachidzokera mubhokisi.
Ini ndoziva zvaunoreva nekuramba uine ziso rekuti kana ivo vari kuda kutikwevera muku simulation nyowani. Ini ndinounganidza kubva kubvunzurudzo yekupedzisira kuti David Icke anotirwisa sesu.
7 April 2020 pa 20: 39
Nehurombo, David Icke akabatanidzawo chiratidzo kurudyi (kuburikidza nerutsigiro Boris Johnson). Saka kana iwe ukaratidza chokwadi uye parizvino wakazvibatanidza iwe kune icho chakanyatsogadzirwa-bapiro rekoko, vateveri vako vachanyudzwa nazvo.
Nehurombo, ndiyo zano.
7 April 2020 pa 21: 05
Sezvazvinomira, hazvina basa kuti iwe uruboshwe here kana kurudyi, muJudha, wechiMuslim kana chero. Isu tese tiri pasi pekusungwa kwedzimba uye tese tinofanirwa kukwidziridzwa kutora chikamu apa.
Asi sezvaunotaura, Resistance ibatsiro.
Isu tese takafanana nemwanakomana anopambadza uyo akaparadza mari yedu (simba) pano pasi. Kunyangwe isu takaita ichi kuruboshwe kana kurudyi hazvina basa. Isu takashinga zvakakwana kuti tidzoke ndiye mubvunzo.
Zviri nani kudzoka somuranda pane kuita somubati nomudzvinyiriri. Vanhu / masangano ayo akanyanya kuderera (eleven / yakanyanya kuderera frequency) vane dambudziko rakakura.
Iyo nzira yekudzoka inzira diki, kazhinji iwe uri wega alleen
7 April 2020 pa 22: 08
Ndiri kutya kuti Icke akapihwa ruzivo urwu, rwekuti 5G inobata kukwira kweokisijeni mumapapu. Ndine runyararo rusviba kufungidzira kuti iyi yakavakirwa-mukati masitepisi mune imwe nzira midhiya ...
Kuti uve akajeka, ini ndinovimba ndine chokwadi chakazara pamusoro paDavid Icke, nekuti anoti zvinhu zvakanaka zvakawanda izvo Ini zvinobvumirana zvizere neni! (uye ndizvo chaizvo chinangwa chemambure akachengeteka)
7 April 2020 pa 23: 35
David Icke anodzorwa kupikiswa, chiratidzo chaanoshandisa chakakosha. Ona vhidhiyo pazasi
"Zviratidzo nezviratidzo zvinotonga nyika, kwete mazwi kana mitemo."
7 April 2020 pa 23: 47
Nongedzo yakanaka, ndosaka isu zvakare tishanyira webhusaiti yako kuti upinde mairi mune mamwe udzame.
Ndakatya kuti achapura zvinhu nekusanganisa 👽 nyaya.
Chatiri kuona manje ndechekuti zvinonzi 5g masts zvakaiswa pamoto wepasi rese. Uku ndiko kukona renyengeri pamakona? Ichi chakaiswa kuitira kuti munhu wese afunge: zvave kutoitwa, hatifanirwe kuita chero chinhu. Iwo masisitimu ekare ayo ari kutsiviwa nemari yeinishuwarenzi here?
Chokwadi chiripo ndechekuti vari panjodzi yekutaura chokwadi chinosimbisa kuziva. Izvi zvinoita kuti intuition yako ive yakasimba kuti iwe ugone kuseta zvirinani.
Izvi zvinoitika zvakare kuburikidza neanoongorora ako, achitarisa zvishoma kupfuura zvaunofunga pakutanga.
Hazvingave zvakanaka here kana tikasvika pakugadziriswa nekukurumidza. (Inonakidza izwi 'mhinduro' 😉).
7 April 2020 pa 11: 40
Ndiani akabvunza vakura chimwe chinhu? Ndiani asarudza pachinzvimbo chevakuru kuti vaiswe zvisina kurongeka, kana zvisina kujeka, kusungwa kwedzimba? Pane chero munhu akabvunza njodzi ipi yavaida kugamuchira? Ndiani akavabvunza kana vari kuda kupa mari yavo yepenjeni kuhupfumi huri kuwira? Ndiani akavabvunza kana, kuti vaponese hutano hwavo, vakawona zvakafanira kuvhara pasi rese nekuvhara hupfumi hwenyika hwese? Ko "njodzi dzeCovid-19" dzakashata zvakanyanya pamugumo wehupenyu hwavo izvo zvinoita kuti vange vachirasikirwa izvo zvinokosha mwedzi yekupedzisira kusanganisira yavo yekupedzisira kutapwa? Uye ndechipi kufa kwekutanga kungaguma nemakawanda? Kana zvine basa zvakare kuti pension yechiDutch yemabhiriyoni gumi nemazana mashanu inogona kukurumidza kubiwa pasi pekufungidzira kwekugoverwa kutsva kwekuponeswa kwecommunist uye neGreen New Deal? Ah, mushure mezvose, ivo vaive chizvarwa chevazhinji vakasvibisa, saka unogona kuisa mukati!
7 April 2020 pa 13: 53
Uye isu tinofanirwa kubvisa iyo mari, saka kunyange mamwe mabhomba! Kana iyo coronaviurs ichiri isina kukwana kunyengetedza vanhu, saka chete mashoma mashoma. Dambudziko, Reaction, Solution chero munhu?
Saka zviri pachena
7 April 2020 pa 15: 01
Haa, ehe imarii mari yaungati kana usingakwanise kuishandisa zvakadaro. Vakaisa
hongu, kuzvirongedza pachavo nenhau dzenhema idzo.
Dai chete zvanga zvataura, uchimhanyisa panzvimbo yekutengesa zvinodhaka 225 miromo, hongu zvinoita kuti zvive zvakanyanya kutendeka ;-), chimwe chinhu !!! kwakanyanya kunaka chokwadi, kuseka !! Corona joke, ha ha (kwete inonakidza)
Nekuti apakati anomukira gonhi tsotsi anoziva kuti masiki anochengetedza akafa masisitimu (senge asingaonekwe hutachiona) nguva dzese. Saka hapana pundutso mune iro ramshackle.
Firita kubva mufauro wefodya waigona kumisa kwechinguva.
Utsi hunobva pautsi hunotungamira huchibva pamaski.
Varombo vatana, vanogara ipapo samakwai mumvere, vanonzwira tsitsi kwazvo.
Vana vanoita chimwe chinhu nezvazvo. Ungaifarire sei?
8 April 2020 pa 14: 16
ha ha, tarisa, uverenge kana chimwe chinhu, kuti uwane kufemerwa enhau dzenhema dzenhema
7 April 2020 pa 13: 58
Nhoroondo dzenziyo kune imwe nhano..Paper Bitte!
Nhoroondo inozvidzokorora pachayo, asi mukunyepedzera kwakadaro kwekuzvishongedza zvekuti hatife takawona kufanana kwacho kudzamara kukuvara kwaitwa.
Lydia Sleeping Beauty akanyora kuti:
7 April 2020 pa 14: 03
Ndichangobva kudanwa kubva kumakwai / amai vechikwata chenhabvu mwanakomana:
Kubva kuLeiden University Hospital
Chikumbiro ndechekukodha iyo app uye kuizadzisa zuva nezuva (kunyangwe kana usina zvichemo).
Icho chinangwa ndechokuwana nzwisiso iri nani mukugoverwa kweiyo corona muNL.
Ndokumbirawo utungamire kune yako kune imwe network.
Wow, ndinopindirwa neiyi gwai. Iyo AH inoratidzika senge maze ine deposits kwese uye vanhu vanosvetuka kubva mukutya.
Kana iwe uchida kunyura zvakadzika mune zviri kuitika, iyi vhidhiyo pakati Lauda Leon na Shane Bales (aka iyo Ruiner) inokurudzirwa. Ivo vaviri vanobva mumapurojekiti. Nezvazvinokosha…
7 April 2020 pa 19: 26
7 April 2020 pa 21: 12
Joris Michels akanyora kuti:
8 April 2020 pa 09: 02
Ndichazofunga nhasi https://www.dotcomnieuws.com/alternatieve-media/david-icke-london-real-6th-april-2020-full/ tarisa icho, asi tanga kuverenga rimwe bhuku nekofi muzuva!
8 April 2020 pa 13: 22
Izvo zvakare zvakamirira Netherlands (sezvandafungidzira kubvira 2013):
« Iko kufunga kukuru: Ndeipi nyika yatichavaka mushure medambudziko re corona?
Musangano wevatori venhau Mark Rutte naHugo de Jonge: iyo imwe nehafu yemamita nzanga uye kusimudzirwa kwemapurogiramu »
Kushanya kwakazara: 2.438.834
iPhone inovanza covid-19 app mune yazvino i-OS 13.5 yekuvandudza
Martin Vrijland op iPhone inovanza covid-19 app mune yazvino i-OS 13.5 yekuvandudza
Sephus op Maurice de Hond anowana imwe nehafu yemamita kutonga nonsense (vhidhiyo)